တီဟီရန်ကနေကပ္ပဒေါကိပြည်ကိုရထားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲ။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး50 Nevsehirတီဟီရန်ကနေကပ္ပဒေါကိပြည်ကိုရထားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲ။
21 / 01 / 2020 50 Nevsehir, 98 အီရန်, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, နိဒါန်းပေးစာ, တူရကီ
တီဟီရန်ကနေ Cappadocia ရထားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲ
Cappadocia ကိုလည်ပတ်ခြင်းသည်အခြားသောစကြာ ၀ universeာကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ဤသို့သောထူးခြားသည့်နေရာရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းသည်။ ဤတွင်မြေအောက်မြို့များ၌လမ်းလျှောက်နိုင်သည်၊ ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များကြားတွင်ထူးခြားသောပုံများရိုက်ကူးနိုင်သည်၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များဖြင့်ချိုင့်ဝှမ်းများကိုဖြတ်သန်း။ ဂူအိမ်တွင်တည်းခိုနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အီရန်သမ္မတနိုင်ငံ၏မြို့တော်တီဟီရန်သည်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကြောင့်ကျော်ကြားပြီးကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားများလာရောက်လည်ပတ်သည်။
Cappadocia မှတီဟီရန်သို့ရောက်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းမှာရထားဖြင့်ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ကားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်မောပန်းသောကြောင့်ခရီးသွားအများစုသည် Transasya Express နှင့်အတူသွားလိုကြသည်။ အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသော်လည်းပထမတစ်ခုမှာရှုခင်းဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်အတွင်းသင်မထိရသေးသောသဘာဝ၏စင်ကြယ်သောအလှတရားကိုခံစားနိုင်သည်။ ဒုတိယ၊ ကားငှားရမ်းခြင်းနှင့်တစ်ညတည်းခိုရန်နေရာရှာခြင်းအတွက်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏မီးရထားအခန်းထဲတွင်အဆင်ပြေသောအိပ်ယာရှိလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အီရန်နှင့်တူရကီ၏လူများကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆင်တူသည်။ ဤရထားခရီးစဉ်တွင်သင်သည်ဖော်ရွေသောဒေသခံများနှင့်နီးကပ်စွာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များဖွဲ့နေစဉ်သူတို့ထံမှသင်ခန်းစာများစွာသင်ယူနိုင်သည်။
Cappadocia သည် Transasia Express ရပ်နားထားသော Kayseri ရထားဘူတာနှင့်နီးသည်။ ဤရထားဘူတာသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကထောက်ပံ့ပေးသည်။ Kayseri ရထားဘူတာသည်အီရန်နိုင်ငံမြို့တော်သို့သင်ခရီးစတင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်, လူလေးယောက်အခန်းများနှင့်အတူအလွန်အဆင်ပြေရထားသင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ နောက်နေ့၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဗန်ကန်ရှိကူးတို့ခရီးကိုသင်သွားမည်။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကူးတို့ဗန်သို့ရောက်ပြီးအီရန်ရထားကသင့်ကိုကြိုဆိုသည်။ Transasya Express တွင်ထရပ်ကားတစ်စီးနှင့်လှည်းတစ်စီးစီ၏အိမ်သာများရှိသည်။
Transasia Express ၏ခရီးသည်များအားလုံးအတွက်အံ့သြဖွယ်ရာအမြင်များ
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များ၊ မမေ့နိုင်သောအမှတ်တရများနှင့်ပိုမိုသောအရာများကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ သင်ပိုမိုလေ့လာလိုပါသလား? သင်ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုဒီမှာစစ်ဆေးနိုင်သည် (https://transasiatrain.com/train/cappadocia-tehran-train-ticket/)
သစ်လေဆိပ်အစ္စတန်ဘူလ် Get ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Denizli cable ကိုကားများနှင့်အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့Bağbaşıကုန်းပြင်မြင့်?
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ Cappadocia အတွက်လေ့ကျင့်
ရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - မီးရထားရထားလက်မှတ်တွေအယ်လ် - TCDD လေ့လာရေးခရီးသညျ့မေးခှနျး
TCDD ယ်ယူရန်လက်မှတ် - ရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါရထားလက်မှတ်တွေဘယ်မှာဝယ်ယူနေကြသနည်း
ကြှနျုပျတို့မညျသို့ရထားလမ်းကိုးစားသနည်း | မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား
Transasia Express ရပ်နားသောနေရာများ
Transacia Express ကို
Transacia Express ကိုလမ်းကြောင်း